လက်ရှိမှာ စားဖို့ရိက္ခာပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများ ၆၀ ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ – GuGuGarGar
Shwe | January 31, 2020 | World News | No Comments
လက်ရှိပြန့်ပွာနေတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝူဟန်မြို့ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနဲ့ စည်းကားလှတဲ့ မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမြို့မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားက ရောက်ရှိနေသူတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။ အခုလို ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်တော့ နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံတွေကတော့ မိမိနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကတော့ ယနေ့ထိတိုင် ကျောင်းသား အယောက် ၆၀ ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
လက်ရှိ ၀ူဟန်မြို့ အခြေအနေ
အစိုးရရဲ့ ကြေငြာချက်ထဲမှာတော့ နေ့ခေါ်မယ် ညခေါ်မယ်နဲ့ တကယ်တမ်း လက်တွေ့မှာတော့ ကျောင်းသားတွေဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ လာခေါ်မယ့်သူ မရှိသေးသလို ၊ရိက္ခာကလည်း နောက် ၅ ရက်စာပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပိုးဖြူသန့် ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက် အကောင့်ပိုင်ရှင်က အခုလိုပဲ မျှဝေထားပါတယ်။
ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေသာဆိုရင်!! စတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် အ တွေးတွေနဲ့ တော်တော် စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်
အခုလေးတင် ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်.. စိတ်လည်း မကောင်းဘူး..
“အကိုတို့ အဆင်ပြေကြရဲ့လား၊ စားစရာ ကျန်သေးလား..” ဆိုတော့ “ အများဆုံး ငါးရက်စာလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အခုရှိတာလေးတွေ ကုန်ရင် စားစရာ မရှိတော့ဘူး၊ တခြားကျောင်းသားတွေလည်း အဲ့လိုပဲ” တဲ့..
“သံရုံးကရော ဘာမှ မဆက်သွယ်ဘူးလား၊ မကူညီဘူးလား” လို့ အားမလို အားမရဖြစ်ရင်း မေးမိတော့ “သံရုံးက စားစရာတွေတော့ ပို့လိုက်ပြီ ပြောတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပို့လိုက်တယ်၊ ဘယ်တော့ရောက်မယ်၊ ဘာတွေ ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာ ဘာမှ မပြောဘူး..” လို့ ခပ်ငြီးငြီးဆိုတယ်.. ကိုယ့်အကိုတွေ၊ မောင်တွေ၊ မိသားစုဝင်တွေသာ အခုလိုပိတ်မိနေရင် ကိုယ်တွေ ဘယ်လောက်စိတ်ပူလိုက်ရမလဲ.. ခုလည်း မြန်မာကျောင်းသား ၆၀ ရဲ့ မိသားစုခြောက်ဆယ်ကျော် စိတ်သောကရောက်လိုက်ရမယ့်ဖြစ်ခြင်း..
ခုလက်ရှိ အခြောက်အခြမ်းလေးတွေကုန်ရင် ကျောင်းသားတွေ ဘာဆက်စားပြီး အသက်ရှင်ရမလဲ.. အစာမရှိဘဲ သူတို့ဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မလဲ.. ဝူဟန်ပိုးထက် ရိက္ခာကို ပိုပူနေရတဲ့ ကျောင်းသားတွေမှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပစ္စည်းချပေးမှာလားလို့ မေးတော့လည်း သေချာမဖြေရုံမက စားစရာပို့လိုက်ပြီသာ ပြောပြီး ဘာမှ ဆက်မေးမရ လမ်းဆုံးနေတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာသံရုံးကိုလည်း အတော်မချင့်မရဲ ဖြစ်ရတယ်..
“တခြားနိုင်ငံတွေရော ဘယ့်နှယ့်လဲ အကို” ဆိုတော့ “အမေရိကန်ကတော့ တရုတ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဝူဟန်လေဆိပ်ထိ တိုက်ရိုက်ဆင်းပြီး သူ့နိုင်ငံသားတွေ ခေါ်သွားပြီ.. မကြေငြာဘဲ သူ့နိုင်ငံသားတွေကို တိတ်တိတ်လေး လာခေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ရှိတယ်..” တဲ့..
“ကျတော့် သူငယ်ချင်း ဗီယက်နမ်ကျောင်းသားတွေ ဗီယက်နမ် ပြန်ရောက်ကုန်ပြီ အမရာ.. ကျတော်တို့ကိုလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံက လာခေါ်ရင် တရုတ်အစိုးရက ပေးပြန်မယ် ပြောပြီးသားကို ခုကျ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စာမထုတ်၊ ခွင့်ပြုချက်မပေးလို့ဆိုပြီး မြန်မာသံရုံးကလည်း ဝန်ကြီးဌာနကိုချည်း ပြောနေတယ်.. ဝန်ကြီးဌာနကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မလှုပ်ဘူး.. ကျတော်တို့ကို မငဲ့ဘူး..”
“ကျတော်တို့က မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆိုလည်း အိမ်တန်းပြန်ဖို့၊ လူထူထူထဲ သွားခွင့်ရဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ကျတော်တို့ကို ဆေးစစ်မယ်၊ ရောဂါလက္ခဏာပြမယ့် နှစ်ပတ်ကျော်မှာ သီးသန့်ခွဲထားမယ်၊ ဆေးရုံမှာ နေရမယ်ဆိုလည်း လက်မခံစရာ မရှိပါဘူး..” အခုက ပြန်ခေါ်မယ်သာ သတင်းထွက်နေတာ၊ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်က ပြန်ခေါ်ဖို့တောင် အဆက်သွယ် မခံရတဲ့ ဘဝတွေ..
“ဝူဟန်မှာ စားစရာကအစ ပူပန်ရင်း အခုလို ပိတ်မိနေမယ့်အစား သူများနိုင်ငံသားတွေလို ပြန်အခေါ်ခံချင်တယ်.. ကျတော်တို့ကို ခွဲထားပြီး စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာပြည်မှာပဲ စောင့်ကြည့်ခံချင်တယ်..” တဲ့.. ခုက ဒုတိယအတွင်းဝန်ဆိုသူက ဖုန်းနှစ်ခါ သုံးခါဆက်တာကလွဲရင် ဘာမှကို လုပ်မပေးတာတဲ့.. “ကျတော်တို့ ပြန်ဖို့ လေယာဉ်စင်းလုံးငှါးဖို့ ပိုက်ဆံစုပေးဆိုလည်း ပေးပါ့မယ်” ဆိုတော့လည်း သံရုံးက အဲ့လိုကျ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုမိန့်မပါလို့ မရဘူးချည်း ငြင်းသတဲ့.. သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲ မရှိဘူးဆို ဘောလီဘောချည်း ပတ်ပုတ်နေတာ.. မိဝေးဖဝေး သူများနိုင်ငံမှာ ပညာလာသင်ရင်း ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေအကြောင်း နားထောင်ရတာ စိတ်လည်း ထိခိုက်ရတယ်..
တချို့လူတွေကလည်း “နင်တို့ ရောဂါပိုး သယ်လာမယ့်အစား ပြန်မလာနဲ့..”၊ “ကိုယ့်ဘာသာပဲ တရုတ်ပြည်မှာ အသေခံလိုက်” ဆိုတာမျိုးတွေကို ပြောထွက်ကြရုံမက ပညာရှင်ဂိုက်ဖမ်းပြီး “Greater good ကို ကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ လူတွေကို ကူးမယ့်အစား သူတို့ကို တရုတ်ပြည်မှာပဲ ဆက်ထားသင့်တယ်” တွေ ပြောကြတယ်.. ပိုးတော့ အဲ့လို မမြင်ဘူး.. မကယ်ဘဲ ပစ်ထားဖို့ကို လက်လည်း လက်မခံနိုင်ဘူး..
အခုပိတ်မိနေတဲ့ ကျောင်းသားခြောက်ဆယ်ဟာ လူငယ်လေးတွေ.. သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ ထူးချွန်ကြလို့ မာစတာတန်းတက်နေကြသူတွေ.. စကောလားရှစ် ရထားတဲ့ ပညာတတ်အညွှန့်အဖူးလေးတွေ.. အရေးအကြီးဆုံးအချက်က သူတို့က ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ.. သူတို့လိုအပ်နေချိန်မှာကျ မကူဘဲ သူတို့တွေ ထူးချွန်သထက် ထူးချွန်လာချိန်ကြမှ မင်းတို့နိုင်ငံတော်ကို အကျိုးပြုကြစမ်းဆို တရားမလား.. သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ကျ လစ်ဟင်းပြီး နိုင်ငံသားတွေ တယောက်ပြီး တယောက် နိုင်ငံကို စွန့်ခွါသွားကာမှ ပညာတတ်ရေပေါ်ဆီတွေလို့ လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ပြောရင် မျှတမလား..
အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူက လိုအပ်ချိန်မှာ ကူညီရမှာပဲ၊ စောင့်ရှောက်ရမှာပဲ.. မလွယ်တာသိပေမယ့် အစိုးရဆိုတာ လွယ်တဲ့အလုပ်ချည်း လုပ်နေဖို့မှ မဟုတ်ဘဲ.. လွယ်တာနဲ့ ပျော်တာပဲလုပ်ချင်တာဆို ဒီမှာတော့ “နင် ရေခဲမုန့်သာ ရောင်းလိုက်” လို့ အင်္ဂလိပ်တွေက ပြောတတ်တယ်.. အစိုးရဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားဆို အခုလိုအယောက်ခြောက်ဆယ် မပြောနဲ့၊ တယောက်တည်း၊ အသက်တချောင်းတည်းဆိုတောင် အားစိုက်ထုတ် ကူညီနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်..
ဖြစ်နိုင်သမျှမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ရောဂါန္တရကပ်ဖြစ်နေတဲ့ဆီက အမြန်ကယ်ထုတ်ဖို့သာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို တိုက်တွန်းချင်တာပါပဲ.. နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးမှာ ဒီလိုကယ်ထုတ်ခံရဖို့လည်း ထိုက်တန်ပါတယ်.. ထိရောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ၊ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီး ဒုက္ခတွင်းထဲက ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ပစ်မထားဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ..
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီစာကို ရှယ်ပေးကြပါ..
မြန်မာကျောင်းသား ၆၀ ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ခေါ်ယူ ကယ်တင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source- ပိုးဖြူသန့်
လကျရှိပွနျ့ပှာနတေဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈဟာဆိုရငျ တရုတျနိုငျငံဝူဟနျမွို့ကနေ စတငျဖွဈပျေါလာတာဖွဈပါတယျ။ ဝူဟနျမွို့ဆိုတာ နိုငျငံတကာ ပညာတျောသငျကြောငျးသားမြားနဲ့ စညျးကားလှတဲ့ မွို့တဈမွို့လညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီမွို့မှာ နိုငျငံရပျခွားက ရောကျရှိနသေူတှလေညျး အမြားအပွားရှိပါတယျ။ အခုလို ဗိုငျးရပျဈ ဖွဈတော့ နိုငျငံတကာက နိုငျငံတှကေတော့ မိမိနိုငျငံသားတှကေို ပွနျလညျချေါယူခဲ့ပွီးတော့ လိုအပျတဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျနကွေပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ကတော့ ယနထေိ့တိုငျ ကြောငျးသား အယောကျ ၆၀ ဦးကို ပွနျလညျချေါယူနိုငျခွငျးမရှိပဲ ဖွဈနပေါတယျ။
အစိုးရရဲ့ ကွငွောခကျြထဲမှာတော့ နခေ့ျေါမယျ ညချေါမယျနဲ့ တကယျတမျး လကျတှမှေ့ာတော့ ကြောငျးသားတှဟော လကျရှိအခြိနျအထိ လာချေါမယျ့သူ မရှိသေးသလို ၊ရိက်ခာကလညျး နောကျ ၅ ရကျစာပဲ ကနျြတော့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကိုတော့ ပိုးဖွူသနျ့ ဆိုတဲ့ လူမှုကှနျရကျ အကောငျ့ပိုငျရှငျက အခုလိုပဲ မြှဝထေားပါတယျ။
ကိုယျ့သားသမီးလေးတှသောဆိုရငျ!! စတဲ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျ အ တှေးတှနေဲ့ တျောတျော စိတျမခမျြးသာဖွဈရပါတယျ
အခုလေးတငျ ဝူဟနျမှာ ပိတျမိနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးသားတယောကျနဲ့ စကားပွောဖွဈတယျ.. စိတျလညျး မကောငျးဘူး..
“အကိုတို့ အဆငျပွကွေရဲ့လား၊ စားစရာ ကနျြသေးလား..” ဆိုတော့ “ အမြားဆုံး ငါးရကျစာလောကျပဲ ကနျြတော့တယျ၊ ကြှနျတျောတို့ အခုရှိတာလေးတှေ ကုနျရငျ စားစရာ မရှိတော့ဘူး၊ တခွားကြောငျးသားတှလေညျး အဲ့လိုပဲ” တဲ့..
“သံရုံးကရော ဘာမှ မဆကျသှယျဘူးလား၊ မကူညီဘူးလား” လို့ အားမလို အားမရဖွဈရငျး မေးမိတော့ “သံရုံးက စားစရာတှတေော့ ပို့လိုကျပွီ ပွောတယျ.. ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုပို့လိုကျတယျ၊ ဘယျတော့ရောကျမယျ၊ ဘာတှေ ပို့လိုကျတယျဆိုတာ ဘာမှ မပွောဘူး..” လို့ ခပျငွီးငွီးဆိုတယျ.. ကိုယျ့အကိုတှေ၊ မောငျတှေ၊ မိသားစုဝငျတှသော အခုလိုပိတျမိနရေငျ ကိုယျတှေ ဘယျလောကျစိတျပူလိုကျရမလဲ.. ခုလညျး မွနျမာကြောငျးသား ၆၀ ရဲ့ မိသားစုခွောကျဆယျကြျော စိတျသောကရောကျလိုကျရမယျ့ဖွဈခွငျး..
ခုလကျရှိ အခွောကျအခွမျးလေးတှကေုနျရငျ ကြောငျးသားတှေ ဘာဆကျစားပွီး အသကျရှငျရမလဲ.. အစာမရှိဘဲ သူတို့ဘယျလောကျတောငျ့ခံနိုငျမလဲ.. ဝူဟနျပိုးထကျ ရိက်ခာကို ပိုပူနရေတဲ့ ကြောငျးသားတှမှော ရဟတျယာဉျနဲ့ ပစ်စညျးခပြေးမှာလားလို့ မေးတော့လညျး သခြောမဖွရေုံမက စားစရာပို့လိုကျပွီသာ ပွောပွီး ဘာမှ ဆကျမေးမရ လမျးဆုံးနတေဲ့ ကိုယျ့မွနျမာသံရုံးကိုလညျး အတျောမခငျြ့မရဲ ဖွဈရတယျ..
“တခွားနိုငျငံတှရေော ဘယျ့နှယျ့လဲ အကို” ဆိုတော့ “အမရေိကနျကတော့ တရုတျအစိုးရခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ ဝူဟနျလဆေိပျထိ တိုကျရိုကျဆငျးပွီး သူ့နိုငျငံသားတှေ ချေါသှားပွီ.. မကွငွောဘဲ သူ့နိုငျငံသားတှကေို တိတျတိတျလေး လာချေါတဲ့နိုငျငံတှလေညျး ရှိတယျ..” တဲ့..
“ကတြေျာ့ သူငယျခငျြး ဗီယကျနမျကြောငျးသားတှေ ဗီယကျနမျ ပွနျရောကျကုနျပွီ အမရာ.. ကတြျောတို့ကိုလညျး ကိုယျ့နိုငျငံက လာချေါရငျ တရုတျအစိုးရက ပေးပွနျမယျ ပွောပွီးသားကို ခုကြ မွနျမာနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက စာမထုတျ၊ ခှငျ့ပွုခကျြမပေးလို့ဆိုပွီး မွနျမာသံရုံးကလညျး ဝနျကွီးဌာနကိုခညျြး ပွောနတေယျ.. ဝနျကွီးဌာနကလညျး သိတဲ့အတိုငျး မလှုပျဘူး.. ကတြျောတို့ကို မငဲ့ဘူး..”
“ကတြျောတို့က မွနျမာပွညျပွနျမယျဆိုလညျး အိမျတနျးပွနျဖို့၊ လူထူထူထဲ သှားခှငျ့ရဖို့ ပွောနတော မဟုတျပါဘူး.. ကတြျောတို့ကို ဆေးစဈမယျ၊ ရောဂါလက်ခဏာပွမယျ့ နှဈပတျကြျောမှာ သီးသနျ့ခှဲထားမယျ၊ ဆေးရုံမှာ နရေမယျဆိုလညျး လကျမခံစရာ မရှိပါဘူး..” အခုက ပွနျချေါမယျသာ သတငျးထှကျနတော၊ တကယျ့ဖွဈရပျမှနျက ပွနျချေါဖို့တောငျ အဆကျသှယျ မခံရတဲ့ ဘဝတှေ..
“ဝူဟနျမှာ စားစရာကအစ ပူပနျရငျး အခုလို ပိတျမိနမေယျ့အစား သူမြားနိုငျငံသားတှလေို ပွနျအချေါခံခငျြတယျ.. ကတြျောတို့ကို ခှဲထားပွီး စောငျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျတောငျ မွနျမာပွညျမှာပဲ စောငျ့ကွညျ့ခံခငျြတယျ..” တဲ့.. ခုက ဒုတိယအတှငျးဝနျဆိုသူက ဖုနျးနှဈခါ သုံးခါဆကျတာကလှဲရငျ ဘာမှကို လုပျမပေးတာတဲ့.. “ကတြျောတို့ ပွနျဖို့ လယောဉျစငျးလုံးငှါးဖို့ ပိုကျဆံစုပေးဆိုလညျး ပေးပါ့မယျ” ဆိုတော့လညျး သံရုံးက အဲ့လိုကြ မွနျမာနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန ခှငျ့ပွုမိနျ့မပါလို့ မရဘူးခညျြး ငွငျးသတဲ့.. သူတို့လုပျပိုငျခှငျ့ထဲ မရှိဘူးဆို ဘောလီဘောခညျြး ပတျပုတျနတော.. မိဝေးဖဝေး သူမြားနိုငျငံမှာ ပညာလာသငျရငျး ပိတျမိနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးသားတှအေကွောငျး နားထောငျရတာ စိတျလညျး ထိခိုကျရတယျ..
တခြို့လူတှကေလညျး “နငျတို့ ရောဂါပိုး သယျလာမယျ့အစား ပွနျမလာနဲ့..”၊ “ကိုယျ့ဘာသာပဲ တရုတျပွညျမှာ အသခေံလိုကျ” ဆိုတာမြိုးတှကေို ပွောထှကျကွရုံမက ပညာရှငျဂိုကျဖမျးပွီး “Greater good ကို ကွညျ့ဖို့လိုတယျ၊ လူတှကေို ကူးမယျ့အစား သူတို့ကို တရုတျပွညျမှာပဲ ဆကျထားသငျ့တယျ” တှေ ပွောကွတယျ.. ပိုးတော့ အဲ့လို မမွငျဘူး.. မကယျဘဲ ပဈထားဖို့ကို လကျလညျး လကျမခံနိုငျဘူး..
အခုပိတျမိနတေဲ့ ကြောငျးသားခွောကျဆယျဟာ လူငယျလေးတှေ.. သကျဆိုငျရာဘာသာရပျမှာ ထူးခြှနျကွလို့ မာစတာတနျးတကျနကွေသူတှေ.. စကောလားရှဈ ရထားတဲ့ ပညာတတျအညှနျ့အဖူးလေးတှေ.. အရေးအကွီးဆုံးအခကျြက သူတို့က ကိုယျ့နိုငျငံသားတှေ.. သူတို့လိုအပျနခြေိနျမှာကြ မကူဘဲ သူတို့တှေ ထူးခြှနျသထကျ ထူးခြှနျလာခြိနျကွမှ မငျးတို့နိုငျငံတျောကို အကြိုးပွုကွစမျးဆို တရားမလား.. သူတို့ကို အကာအကှယျပေးဖို့ကြ လဈဟငျးပွီး နိုငျငံသားတှေ တယောကျပွီး တယောကျ နိုငျငံကို စှနျ့ခှါသှားကာမှ ပညာတတျရပေျေါဆီတှလေို့ လကျညှိုးထိုး အပွဈပွောရငျ မြှတမလား..
အစိုးရဆိုတာ ပွညျသူက လိုအပျခြိနျမှာ ကူညီရမှာပဲ၊ စောငျ့ရှောကျရမှာပဲ.. မလှယျတာသိပမေယျ့ အစိုးရဆိုတာ လှယျတဲ့အလုပျခညျြး လုပျနဖေို့မှ မဟုတျဘဲ.. လှယျတာနဲ့ ပြျောတာပဲလုပျခငျြတာဆို ဒီမှာတော့ “နငျ ရခေဲမုနျ့သာ ရောငျးလိုကျ” လို့ အင်ျဂလိပျတှကေ ပွောတတျတယျ.. အစိုးရဟာ ကိုယျ့နိုငျငံသားဆို အခုလိုအယောကျခွောကျဆယျ မပွောနဲ့၊ တယောကျတညျး၊ အသကျတခြောငျးတညျးဆိုတောငျ အားစိုကျထုတျ ကူညီနိုငျဖို့ လိုပါတယျ..
ဖွဈနိုငျသမြှမှာ ကိုယျ့နိုငျငံသားတှကေို ရောဂါန်တရကပျဖွဈနတေဲ့ဆီက အမွနျကယျထုတျဖို့သာ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနနဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကို တိုကျတှနျးခငျြတာပါပဲ.. နိုငျငံသားတှရေဲ့ အခွခေံ လူ့အခှငျ့အရေးမှာ ဒီလိုကယျထုတျခံရဖို့လညျး ထိုကျတနျပါတယျ.. ထိရောကျတဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှေ၊ စောငျ့ရှောကျမှုတှေ ပွငျဆငျထားပွီး ဒုက်ခတှငျးထဲက ကိုယျ့နိုငျငံသားတှကေို ပဈမထားဖို့ တောငျးဆိုပါရစေ..
ကြေးဇူးပွုပွီး ဒီစာကို ရှယျပေးကွပါ..
မွနျမာကြောငျးသား ၆၀ ကို အမွနျဆုံး ပွနျလညျချေါယူ ကယျတငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ Source- ပိုးဖွူသနျ့